विराटनगरमा त जहाजै डुब्न लाग्यो, तराईलाई तागत देउ सरकार
कतिको ज्यान गएको छ, केही बेपत्ता छन् । हजारौं नागरिक विस्थापित हुनु परेको छ । ठाउँठाउँमा सडक भत्किएका छन् । ठूला नदीमा मात्रै होइन, ससाना खोलामा समेत बाढी आएपछि नदी खोला किनारमा घर हुनेलाई त्रास बढाएको छ । काठमाडौंकै कतिपय ठाउँ समेत डुबानमा परेका छन् ।
विराटनगर विमानस्थल त बन्दरगाह जस्तै भएको छ । विमानस्थल जलमग्न हुँदा धावनमार्गमा रहेको जहाज डुब्नै लागेको तस्बिर सार्बजनिक भएको छ । यसअघि विमानस्थलमा पानी जमेर जहाजै डुब्न लागेको घटना बाहिर आएको थिएन । यसपाली जहाज समेत डुबाउन खोज्नेगरी पानी परेको छ ।
जहाज डुबाउन खोजे पनि विमानस्थलमा क्षति भने भएको छैन । तर तराईका अरु धेरै ठाउँका बासिन्दा बिचल्लीमा परेका छन् । कतिले परिवार र आफन्त गुमाउनु परेको छ । धेरैका घर र धनमाल डुबेका छन् ।
वरपर ओभानो भन्ने ठाउँ कहिँ कतै छैन । चुल्हो कहाँ बाल्ने ? बाल्ने ठाउँ पाएपनि के पकाउने ? के खाने ? कहाँ सुत्ने ? धेरैको बिजोग छ । कतिपयसँग शरीरमा भएका एकसरो लुगाबाहेक अरुथोक भन्ने केही छैन । यतिबेला बाढी प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दालाई तत्कार उद्धार र राहतको खाँचो छ । डुब्न लागेकालाई सिन्काकै मात्र भएपनि सहारा काफी हुन्छ । तर सिन्का समाएर उठ्न सक्ने तागत चाहिएको छ ।
सरकारले बाढी प्रभावितको उद्धारको लागि तालिमप्रपाप्त सुरक्षाकर्मी र अरु उपलव्ध जनशक्तिको परिचालन गरेर उच्च प्राथमिकताका साथ काम भइरहेको जनाएको छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पनि बाढीपहिरो प्रभावित जिल्लाका प्रशाशन प्रमुखलाई सम्पर्क गरेर उद्धार, राहत र सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरणलगायत सबै प्रकारको सहयोग प्रदान गर्न निर्देशन दिनुभएको छ ।
तर बाढी प्रभावित क्षेत्रमा उद्धार तथा राहतको काम प्रभावकारी हुन सकेको छैन । सुरक्षा निकाय र प्रशासन कार्यालय नजिक भएका ठाउँमा प्रभावितले केही साथ पाएका छन् । तर विकट ठाउँका प्रभावितले सरकारी साथ र सहयोग पाउन सकेका छैनन् । बाढी पहिरो प्रभावित सबै क्षेत्रमा सरकारले उद्धार तथा राहतको कामलाई प्रभावकारी बनाउन ढिलो भैसकेको छ ।
विपतको योबेला सरकारी निकाय मात्र होइन, राजनीतिक दलको सक्रियता पनि बढ्नुपर्ने खाँचो छ । अझ तराई मधेशका नागरिकको हक, हित र अधिकारको पक्षमा कुरा गरेर नथाक्ने नेताहरु त झन् बढी जिम्मेवार हुनुपर्ने हो ।
बाढी र डुबानले पीडित तराईका नागरिकलाई यतिबेला सहयोग गर्ने हात र साथ चाहिएको छ । सरकार, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, राजनीतिक दलका नेता कार्यकर्ता, सामाजिक संघसंस्था र तपाईं हाम्रो सानो प्रयास पनि यतिबेला प्रभावितका लागि ठूलो सहारा बन्न सक्छ ।
तस्बिर:बसन्त ढुंगानाको फेसवुकबाट